Senda Viva, ogige ezumike ezinụlọ kachasị ukwuu na Spain | Akụkọ Njem
Foto | Pzọ Ndụ
N'akụkụ Bárdenas Reales bụ Senda Viva, otu ogige a raara nye ezumike ezinụlọ a ghọtara dị ka nke kachasị na mpaghara Iberia. Ngwakọta egwu pụrụ iche nke ogige ntụrụndụ, zoo na omume nke ma nwata ma okenye. Can gaghị ida a!
1 Ebee ka ọ dị?
2 Mgbapụ tinyere Senda Viva
3 Kedu ka ogige Senda Viva dị?
4 Ebe nkiri Senda Viva
5 Ezinụlọ anụmanụ nke Senda Viva
6 Ọnụahịa tiketi
7 Ozi gbasara mmasị na Senda Viva
8 Oge na Senda Viva
Senda Viva dị na mmiri Navarrese, na nso Bardenas Reales Natural Park (nke UNESCO kwuru na Biosphere Reserve) na 80 kilomita na ndịda Pamplona. Site na hectare 120 nke ndọtị, anyị na-eche ogige ntụrụndụ kachasị ezinụlọ na Spain
Iji nweta Senda Viva ị ga-eme ya n'okporo ụzọ, ọkachasị site n'iji ụzọ Virgen del Yugo, 31513 Arguedas, ma ọ bụ site na ụgbọ ala nke onwe ma ọ bụ site na ịnye ọrụ njem. nke ohere karịsịa n'oge oge dị elu, nke na-eburu onye ọbịa n'ọnụ ụzọ nke ebe obibi ebe ha bi ma hapụ ha n'ọnụ ụzọ. Nke a na - enye gị ohere ịchekwa obere ijegharị nke ị ga - eme site na ụgbọ ala nke onwe.
Ekwela ka onye ọ bụla maa jijiji! Uzo a di nkpa ma nye gi ohere ije di uto nke na echebara ihe gbara gi gburugburu. Agbanyeghị, ịkpọrọ obere ụmụaka nwere ike ịbụ ntakịrị oge, tụmadị na ụzọ ịlaghachi mgbe ike gwụgogoro ha ogologo ụbọchị ha na-anụ ụtọ Senda Viva.
Mgbapụ tinyere Senda Viva
Ozugbo ịbanye na ogige Senda Viva, onye ọbịa ahụ nwere ike iji ụkwụ na-agagharị ma ọ bụ jiri ụdị njem dị iche iche dị ka trailers ma ọ bụ obere ụgbọ oloko. Na ụkpụrụ, oge nke transports ndị a bụ ihe dị ka nkeji 25 ọ bụ ezie na ọ dabere na nbata nke ndị mmadụ.
Kedu ka ogige Senda Viva dị?
E kewara okporo ụzọ dị n'akụkụ Senda Viva na mpaghara anọ: Ugbo, Ọhịa, Obodo na Ihe ngosi. Ozugbo anyị banyere ogige ahụ, anyị ga-ahụ obodo ahụ bụ ebe mbido ụzọ. Ebe a bụ ebe ozi, ndị na-atụchi akwụkwọ na ndị na-ekpochi ihe, ebe ịgbazite oche ụmụaka na oche oche oche, ụlọ ahịa ihe ncheta, ụlọ mbikọ, ebe ehi na ebe obibi na-ebi ebi, ụlọ na-atụ ụjọ nke ụfọdụ ihe odide pụrụ iche bi.
Ije ije n'okporo ụzọ Ehi na-aga n'ihu na Fair, anyị nwere ike ịhụ ụdị dị iche iche dịka ịnyịnya Burguete, atụrụ latxa, ehi ehi Pyrenean ma ọ bụ oke ehi. Ozugbo anyị dị na mpaghara a nke ogige ahụ, anyị agaghị agbaghara ebe nlegharị anya dịka mmiri na-ekpo ọkụ, ihe nkiri dị egwu, egwuregwu-obi ụtọ, ndị na-eme mkpọtụ ma ọ bụ enyo ọchị. Na-ezumike, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịga ọdọ ọdọ ma ọ bụ ngosi si imi. Emechaa, ị nwere ike ịga n'ihu nleta na-ekiri enwe ma ọ bụ jaguars capuchin. Kemmasi!
Anyị na-aga n'ihu na oke ọhịa ebe ịnyịnya ọhịa, enyí nnụnụ, anụ ọhịa wolf ma ọ bụ agụ bụ ezigbo ndị ncheta. N'ebe a, ị ga-ahụkwa mma ọdịda na ebe egwuregwu ụmụaka. O nwekwara ohere ụlọ oriri na ọ anotherụ anotherụ ọzọ a na-akpọ El Balcón de la Bardena na echiche nke ga-eju gị anya na ngosipụta dị egwu nke Bardenas Reales Natural Park.
N'ikpeazụ, na Ugbo enwere uzo nke 1.100 m2, ugbo ala-ugbo na nke raptor. Ọzọkwa, ebe a bụ ọrụ onwe onye a na-akpọ La Recoleta maka nri ngwa ngwa.
Ebe nkiri Senda Viva
Ogige Senda Viva nwere ihe karịrị iri atọ na-adọrọ mmasị maka ndị niile na-ege ntị, n'etiti ha bụ: Bobsleigh (otu ụzọ na-agba ọsọ ogologo otu kilomita); Valhalla (nke bụ eziokwu dị adị na-agagharị na mmiri); a Tubing kwụ ọtọ (ebe onye ọbịa na-agbada na mkpọda nke 300 mita na 60 mita nke enweghị nsogbu na nnukwu ụgbọ mmiri) ma ọ bụ Nnukwu Zip, banye ndị ọzọ.
Foto | Nkwari akụ Senda Viva
Ezinụlọ anụmanụ nke Senda Viva
Ogige a enweworị ihe karịrị anụmanụ 800 nke ụdị 200 dị ka anụ ọhịa bea, aja otter, ọdụm, wallaby kangaroos na ọtụtụ agụ owuru. Senda Viva na-aga n'ihu na mmemme maka nchekwa nke ụdị anụ ọhịa nọ n'ihe egwu nke mkpochapụ dị ka Navarrese jackfruit, ehi betizus ma ọ bụ ịnyịnya burguete.
Tiketi ndị okenye na Senda Viva nwere ọnụahịa nke euro 28 na igbe igbe na euro 25 n'ịntanetị Mgbe tiketi maka ụmụaka, ruo afọ 11, na maka ndị lara ezumike nká bụ euro 21 na ọfịs igbe na euro iri na asatọ n'ịntanetị. Undermụaka nọ n'okpuru afọ 18 bụ n'efu. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, ụbọchị nke abụọ nke nleta na ogige Senda Viva ọnụ ụzọ na-efu ọkara.
Ozi gbasara mmasị na Senda Viva
A na-emegharị ogige ahụ maka ụmụaka, mana ebe nkiri niile nwere obere ogo dị mkpa. Enwere ike ịdakwasị ha n'ọtụtụ ihe, ee, soro ole na ole.
A naghị anabata ihe ọrinkụ orụ ma ọ bụ nri ka enwere ọtụtụ ụlọ nri na Senda Viva ebe ị nwere ike ịkwụsị iri nri ma ọ bụ izu ike. Otú ọ dị, e nwere ebe e si enweta mmiri ọ drinkingụ drinkingụ n’ebe niile.
N'ihe banyere ileta Senda Viva n'oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n'oge ọkọchị, ọ ga-adị mma ibute okpu, mkpuchi anwụ ... ka ọ dị ezigbo ọkụ.
Enwere Wi-Fi na ogige ahụ dum.
Oge na Senda Viva
Ruo Nọvemba 4: Satọdee na Sọnde site na 11:00 nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke ụtụtụ.
El Pilar Bridge: site na Ọktọba 12 ruo 14, site na 11:00 nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke ụtụtụ.
Nọmba Nọvemba: site na Nọvemba 1 ruo 4, site na 11:00 nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke ụtụtụ.
Dị ka nke November 5: mechiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Oge ntụrụndụ » Senda Viva, ogige ezumike ezinụlọ kachasị ukwuu na Spain